Magaalota Godinaalee naannoo Oromiyaa gara garaa keessatti hiriirri mormii geggeeffame - NuuralHudaa
Magaalota Godinaalee naannoo Oromiyaa gara garaa keessatti hiriirri mormii geggeeffame
On Dec 4, 2018 29
Magaalota Godinaalee Oromiyaa heddu keessatti kaleessa irraa kaase hiriirri geggeeffamaa jiru guyyaa har’aatis cimee itti fufeera. Hiriira kana irratti jiraattonni magaaloota Oromiyaa adda addaa ajjeechaan daangaalee naannoo Oromiyaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu jechuun gaafataa jiran.
Magaalota guyyaa har’aa hiriirri keessatti geggeeffame jidduu, Naqamtee, Walisoo guyyaa lammaffaaf, Incinnii, Baroodaa, godina addaa naannawa Finfinnee Alamganaa, Buraayyuu, Sabbataa, Hirna, Tulluu Boolloo, Arjoo fi magaalooni birootis kan jiran tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Hiriira magaalaa Sabbataa keessatti geggeeffame irratti saamichi laafaa haa dhaabbatu, Ummata Oromoo qe’ee fi qabeenya irraa buqqisuun haa dhaabatu, Poolisiin Oromiyaa hidhannoo gahaa haa hidhatu dhaadannoon jedhu kan dhageessifame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Hiriirri kun nagayaa kan xumurame tahuunis beekameera.
July 6, 2022 sa;aa 8:11 am Update tahe